News Archives - Page4of 336 - Myanmar Fire Services Department
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန်မြို့နယ်၊ ကန်တော်လေး(အနောက်)ရပ်ကွက်၊ ၈၈လမ်း၊ SKY 88 Hotelတွင် အမျိုးသမီး (၂)ဦး ဓါတ် ....
editor | Jan 11, 2021 | News, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
၉.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ ၀၇ ၀၆ အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန်မြို့နယ်၊ ကန်တော်လေး (အနောက်)ရပ်ကွက်၊ ၈၈လမ်း၊ SKY 88 Hotel၊ RC(၈)ထပ် အဆောက်အဦတွင် တည်းခိုနေထိုင်သော အမျိုးသမီး(၂)ဦးသည် (၅)လွှာမှ မြေညီထပ်သို့ ဓါတ်လှေကားအသုံးပြု၍ အောက်သို့ဆင်းစဉ်...
Fire occurred at the fuel boat in Maupin district, Ayeyarwaddy region
editor | Jan 8, 2021 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
On7Jan, at about 16 10, fuel tanker caught fire during refilling the fuel when the spark of the pump ignited the vapor of the fuel inside the tanker. The fire occurred at the landing site of the Ayeyarwaddy river, Danuphyu township, Maupin district, Ayeyarwaddy...
Vehicle accident on the Aung-pan-Loikaw road, Taunggyi district, Shan state
editor | Jan 7, 2021 | ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
On6Jan, at about 09 30,a12 wheel Hyundai truck carrying the cement power bags from Yangon to Loikaw plunged down ravine when the brake system of the truck failed. The accident occurred near the Naungwo village, Pinlaung township, Aungpan-Loikaw road, Taunggi...
Page4of 336« « Previous...23456...102030...Next »